မန္တလေးမြို့မှ အဝေးသင်ကျောင်းသား/သူများ အတွက် နိုင်ငံတကာပညာသင်အခွင့်အလမ်းများ အကြောင်းအခမဲ့ဆွေးနွေးပွဲ - Crown Education
မန္တလေးမြို့မှ အဝေးသင်ကျောင်းသား/သူများ အတွက် နိုင်ငံတကာပညာသင်အခွင့်အလမ်းများ အကြောင်းအခမဲ့ဆွေးနွေးပွဲ
“မန္တလေးမြို့မှ အဝေးသင်ကျောင်းသား/သူများ အတွက် နိုင်ငံတကာပညာသင်အခွင့်အလမ်းများ အကြောင်းအခမဲ့ဆွေးနွေးပွဲ”
[Online Registration Link : http://bit.ly/crownmdy14]
❑ ပြည်တွင်းမှာ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ပညာရေး(Distance Education)ပထမနှစ်၊ဒုတိယနှစ်တက်ရောက်နေသူတွေ… အဝေးသင်ဘွဲ့လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားပြီး ကိုယ့်ပညာရေးအတွက် နောက်တစ်ဆင့်မြှင့်တင်ဖို့စဉ်းစားနေသူတွေ…နိုင်ငံခြားမှာ(၁)နှစ်လောက်ပညာသင်ကြားပြီးမှ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ Careerကို တိတိကျကျရွေးချယ်လုပ်ကိုင်ဖို့ စဉ်းစားထားတဲ့ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေအတွက် မတ်လ(၁၄)ရက်နေ့ ၊ မန္တလေးမြို့မှာ အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်းအခမဲ့ဆွေးနွေးပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲအတွင်း –
■ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့လက်မှတ်နဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ ဘယ်လိုဘွဲ့တွေတက်လို့ရမလဲ…
■ အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်၊ဒုတိယနှစ် ဖြေဆိုထားတဲ့ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေ လျှောက်ထားလို့ရမယ့် (၃ဝ%)မှ (၁ဝဝ%) နိုင်ငံတကာပညာသင်ဆုများအကြောင်း ….
■ အဝေးသင်တက်နေရင်း HND,ABE,NCC လက်မှတ်ရှိထားမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေမှာ ဘာသာရပ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရနိုင်လား… ဘွဲ့ရဖို့ အချိန်ဘယ်လောက် ထပ်ပေးရမလဲ…
■ အဝေးသင်(၃)နှစ်ဘွဲ့ရထားတဲ့ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေ Master Degree(ဘွဲ့လွန်)ဆက်တက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေလိုမလဲ…
■ MBA/M.Sc Programတွေအတွက် ပေးတဲ့ပညာသင်ဆုတွေကို ဘယ်လိုလျှောက်ထားရယူနိုင်မလဲ?
■ ဘယ်နိုင်ငံက ကျောင်းအပြီးဆက်လက်နေထိုင်အလုပ်လုပ်နိုင်ခွင့်ရှိလဲ?
■ ယူကေ၊ယူအက်စ်၊ကနေဒါ၊သြစတြေးလျနိုင်ငံတွေမှာ ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးနဲ့တက်ခွင့်ရဖို့ IELTS/ TOEFL/ ACT/ SATဘာကို ဦးစားပေးဖြေရမလဲ…
စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားသွားမှာဖြစ်လို့ မန္တလေးမြို့မှ နိုင်ငံတကာပညာရေးစိတ်ဝင်စားသူလူငယ်များ အခမဲ့စာရင်းပေးသွင်း တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
မတ်လ (၁၄)ရက်၊ ၂ဝ၂ဝ ၊စနေနေ့။
မနက် (၁ဝ:ဝဝ)နာရီ မှ (၁၁:ဝဝ) နာရီ
CROWN Education Mandalay အမှတ် စီ-၅၊ ၆၅လမ်း၊ ၃၁လမ်းနှင့် ၃၂လမ်းကြား၊ ရတနာမန္တလေး အဆင့်မြင့်အိမ်ရာ၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်
ဖုန်း ✆ 09 975 700 800, 09 975 800 800